Hlola iStrasbourg, eFrance - World Tourism Portal
Hlola iStrasbourg, eFrance
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eStrasbourg, eFrance.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseStrasbourg
Bukela ividiyo mayelana neStrasbourg
Hlola iStrasbourg inhloko-dolobha yesifunda se-Alsace France okuyinto eyaziwa kabanzi ngokubamba izikhungo eziningi ezibalulekile zaseYurophu. Yaziwa futhi ngesikhungo sayo esihle somlando - iGrand Île - okwakuyindawo yokuqala yedolobha ukuhlukaniswa ngokuphelele njengeNdawo Yamagugu Womhlaba yi-UNESCO.
IStrasbourg itholakala osebeni olusentshonalanga lomfula iRhine, futhi isisendaweni ekahle e-Upper Rhine Valley selokhu yaphambilini. Yayivele ixazululwe ukusuka kwi1300 BC kuye phambili, futhi yathuthukiswa yaba yimakethe yaseCeltic emakethe Argentorate. AmaRoma anqoba le ndawo ezungeze i-12 BC, futhi ayiqamba kabusha ngokuthi Argentoratum, futhi yathuthuka yaba yindawo ebalulekile yezempi noma i-castra, ukubeka i-8th Legion kusuka ku-90 AD kuye phambili.
Ngemuva kokuwa koMbuso WaseRoma, i-Alsace yathathwa yi-Alemanni, isizwe samaJalimane, esagcina sesingeniswe embusweni wamaFrank. Kwenye indawo ekuqaleni kweNkathi Ephakathi, idolobhana kumele liguqule igama laso laba IStratisburgum. Ngemuva kokwehlukana koMbuso WamaFrank ngekhulu le-9th, i-Alsace yaba yingxenye yoMbuso WaseRoma Ongcwele, futhi yahlala ngaphakathi kombuso waseJalimane kuze kube ngekhulu le-17th, noma ngabe iStrasbourg ithole isimo seFree City e1262.
IStrasbourg kwakuyisayithi lomunye wababhali ababi kakhulu beNkathi Ephakathi e-1349, lapho amaJuda angaphezu kwenkulungwane eshiswa esidlangalaleni aze afa, futhi amaJuda ayabandlululwa futhi eshushiswa kwaze kwaba sekupheleni kwekhulu le-18th.
IStrasbourg ingelinye lamadolobha okuqala amaJalimane ukwamukela umbhikishi, ukholo lwamaLuthere ekuqaleni kwekhulu le-16th. Ngenxa yalokhu, yaba yisikhungo sokufunda kobuntu kanye nokuphrinta incwadi; iphephandaba lokuqala eYurophu lanyatheliswa eStrasbourg. E-1681, leli dolobha lafunwa yinkosi yaseFrance uLouis XIV, owathola inzuzo kwiziphithiphithi ezalandela iMpi Yeminyaka eyi-30 Germany. Kodwa-ke, ngokungafani nayo yonke iFrance, ukholo olwalubhikisha lwalungachithiwe. Isimo seStrasbourg njengedolobha elikhululekile saphela ngeFrance Revolution.
Ngemuva kwempi yaseFrance neyaseJalimane ye-1870, amaJalimane anqamula idolobha futhi asebenzisa inqubomgomo ye-Germanisation, okwaholela ekudingisweni kwalabo abathanda ukuhlala eFrance. Ngemuva kokwehlulwa kweJalimane eMpini Yezwe I, leli dolobha libuyele eFrance, futhi manje kwase kuyisikhathi samaFulentshi ukuzama ukuqeda imfutho yokuhlaselwa amaJalimane. Ngesikhathi seMpi Yezwe Yesibili, amaNazi abheka ama-Alsati njengamaJalimane, futhi abaningi baphoqeleka ukuthi balwe ebuthweni laseJalimane - isimo esiholele ekutheni bamangalelwe ngamanga ukuthi babambisana ngemuva kwempi.
Namuhla, iStrasbourg idolobha lesishiyagalolunye ngobukhulu France enabantu abacishe babe yingxenye yesigidi endaweni yedolobha elikhulu eliwela umfula liye edolobheni laseJalimane iKehl, osebeni olusempumalanga yeRhine. Idolobha ngokwalo liyisihlalo soMkhandlu WaseYurophu, iNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu, i-European Ombudsman, i-Eurocorps, i-European Audiovisual Observatory futhi, okumnandi kakhulu, yiPhalamende laseYurophu, elibamba nezikhathi eBrussels.
Isikhungo sedolobha esinomlando sincane ngokwanele ukuba singahlolisiswa kalula ngezinyawo, kepha ngamabanga amabanga amade ungasebenzisa i-tram enhle kakhulu nenethiwekhi yebhasi. Ukuhamba ngebhayisikile futhi kuyindlela enhle, engenawo amagquma okugibela nemizila yokuhamba ngebhayisekili ezindaweni eziningi.
IStrasbourg indawo evakashelwa izivakashi ngokuyinhloko ibonga isikhungo sayo sedolobha eligcinwe kahle futhi elihamba ngezinyawo, esingabonakala kalula ngezinyawo noma ngebhayisekili. Ezinye izindawo, ikakhulukazi ezungeze isonto elikhulu, ziheha amaqembu amakhulu abavakashi, ikakhulukazi ehlobo kanye namaholide kaKhisimusi. Bahlolwa kangcono ngaphandle kwamahora aphezulu, kusihlwa noma ekuseni kakhulu.
Njalo ngamaSonto okuqala enyanga, ukungena kuyo yonke iminyuziyamu mahhala.
I-Musée de l'Œuvre Notre-Dame, iTu-Su 10AM-6PM, Mo ivaliwe. Ngapha nje kwesonto, lesi sigcinamlando esihle sobuciko benkolo obuphakathi neRenaissance obuhlobene nesonto.
UPalais Rohan, We-Mo 10AM-6PM, uTu uvaliwe. Lesi sigodlo sangaphambili esibonakalayo siyisifanekiso esihle sobuciko bokwakha baseFrance bekhulu le-18th. Manje ineminyuziyamu emithathu ehlukene:
UMusée des Beaux-Arts (uMnyuziyamu wezobuCiko obuhle),
I-Musée Archéologique (Museum of Archaeological Museum)
I-Musée des Arts Décoratifs (iMnyuziyamu wezobuciko bokuhlobisa.
Musée Alsacien (I-Alsatia Museum), We-Mo 10AM-6PM, iTu ivaliwe. Lo mnyuziyamu uveza izinto ezimpilweni zansuku zonke zabantu base-Alsatia ukusuka ku-13th kuye ngekhulu le-19th: izingubo, ifenisha, amathoyizi, amathuluzi obuciko nabalimi, nezinto zenkolo ezisetshenziswe emicikilweni yobuKristu, yamaJuda, kanye neyasemhedeni. Imibukiso ingamakamelo axhumene nezitebhisi zokhuni namamakholoni ezindlini eziseduze zama-Renaissance-era ezungeze igceke eliphakathi nendawo.
Umlando weMusée (Umnyuziyamu Wezomlando), ITu-Su 10AM-6PM, Mo ivaliwe. Umnyuziyamu omuhle kakhulu futhi osebenzisana womlando weStrasbourg kusuka ezinsukwini zokuqala zangaphambi kokusungulwa kwe-European Union. Yonke imibukiso inolimi olunthathu nesiJalimane nesiNgisi. Umhlahlandlela womsindo wamahhala (amahora we-2.5) ukwengeza okuhle ekubukeni futhi kuthuthukisa okuhlangenwe nakho. Kunconywe ngokuphelele.
I-Musée d'Art Moderne et Contemporain (Imyuziyamu yobuciko banamuhla. I-Tu-Su 10AM-6PM, Mo ivaliwe. Lesi sakhiwo sanamuhla esibanzi emabhange omfula i-Ill sibonisa ubuciko be-Western Europe ukusuka kuma-1870s kuye ezikhathini zakamuva.
UMusée Tomi Ungerer We-Mo 10AM-6PM, Tu uvaliwe. Lesi seMnyuziyamu siqukethe imidwebo enkulu yemidwebo eyenziwe ngumzobi waseStrasbourg uTomi Ungerer; imibukiso ejikelezayo ikhombisa ukukhetha komsebenzi wakhe, okubandakanya imifanekiso yezincwadi zezingane, ukukhangisa, umsebenzi we-satirical ne-erotica.
I-Musée Zoologique (I-Zoological Museum), We-Mo 10AM-6PM, iTu ivaliwe. Lesi sigcinamlando singesinye samaqoqo amakhulu omlando wemvelo eFrance, futhi sakhiwa ekuqaleni kwekhulu le-18th.
Ezinye izinto ezikhangayo
I-L'Opéra (Indlu ye-Opera),
IPetite France yigama elinikezwe indawo encane ephakathi kwemifula, ngaseningizimu yeGrande Île. Kuyikhaya lemigwaqo nezakhiwo ezinhle kakhulu zaseStrasbourg, ezinamahholo amakhulu wedolobha (izindlu izingodo) ukuncika ngaphandle kwemigwaqo emincane eboshiwe. IPetite France ifana neColmar (idolobha ihora eseningizimu), enamamisele amahle nasezindlini ezingamapulangwe.
Kwenye indawo eStrasbourg
Isihlalo soMkhandlu WaseYurophu (I-Le Palais de l'Europe) (1977), eyakhiwe nguHenry Bernard
INkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu (i-1995), eyakhiwe nguRichard Rogers
IPalamende YaseYurophu (1999), eyakhiwe yi-Architecture Studio
Indlunkulu yethelevishini ye-ARTE
I-terminus ye-B-line tramway eHoenheim (indawo engasenyakatho)
Indawo de la République - Umgwaqo ophambili ohaqwe yizakhiwo zomphakathi ezinobuhlakani
Isinagoge laseGrande de la Paix, elise-Avenue de la Paix.
ICité de la Musque et de la danse, iStrasbourg Conservatory of Music and Dance. IL'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, idlala amakhonsathi cishe njalo ngeviki.
Ihhovisi lezokuvakasha lithengisa uhambo oluhlukahlukene lokuziqondisa oludlula edolobheni (Middle Ages, Renaissance, Modern and Contemporary), futhi luhlela nokuvakasha kwebhayisekili ngeFaubourgs (indawo engaphansi kweNeororf neNeuhof). Amamephu, izincwajana kanye nokuhlala kwemizuzu yokugcina kuyatholakala.
Ukuvakasha ngebhasi lamanzi kuyatholakala eduze nasePalais des Rohans (eningizimu yekati). Lolo hambo (cishe i-45 min.) Lujikeleza enkabeni yedolobha nesifunda saseYurophu.
Izimakethe zikaKhisimusi zitholakala ezindaweni eziningi, kodwa ezibaluleke kakhulu futhi zinhle ziyindawo uBroglie nendawo ye-la Cathédrale, yize ziminyene. Yizindawo ezinhle kakhulu zokuphuza iwayini elishisayo (vin chaud) nokudla amakhukhi kaKhisimusi (Brädeles).
Idolobha linikeza imicimbi eminingi yamasiko. Kunenqwaba yeminyuziyamu, amakhonsathi- womabili mahhala futhi awekho-mahhala, ama-opera, ama-ballet, nokuningi. Idolobha leli linendawo enhle yezepolitiki kanye neYunivesithi enkulu kakhulu. Kungumuzi omuhle kakhulu ukuba ngumfundi. Amakhekhe namakhekhe ayemukelwa futhi abantu bendawo banomusa omkhulu. Bayazamukela zonke izilimi, kodwa njalozama ukusebenzisa isiFulentshi lapho ungakwazi.
I-Conservatory, Opera, Ballet, ne-Orchestra bafaka imikhosi ngezikhathi eziningi ezahlukene zonyaka. Ehlobo, cishe kunezimakethe lapho ungathenga khona ukudla kwasendaweni, izincwadi ezisetshenzisiwe, ubuciko bendawo, nezinto zohlobo lwezimakethe zezindiza. AmaMarke asehlobo cishe amangalisa njengamamakethe kaKhisimusi, nje ayihlotshiswe kahle. Kukhona cishe njalo isenzo (noma umbhikisho) okwenzeka phambi kwe-Cat Catrale noma ePark Kleber.
Noma kungekho imicimbi ekhethekile eStrasbourg, okungajwayelekile, ukuhambahamba edolobheni elidala kuyindlela enhle yokudlula kosuku. Yenza iphuzu lokungena emasontweni ubheke ubuciko bomzimba kanye nezitho zomzimba. Kwesinye isikhathi ungezwa isitho noma ikwayara iziprakthiza futhi iminyango imvama ukuvula. Futhi kunamakhofi amaningi amahle wokuma nokuphumula lapho uhambela uhambo lwakho.
Amakhono we-Alsatia maningi futhi angadliwa ezindaweni zokudlela eziningi zendabuko, edolobheni noma komakhelwane. Ikakhulu akufanele uvakashele i-Alsace ngaphandle kokuthola i-sauerkraut (sauerkrautngesiFulentshi). Lokhu kulethwe kuwe kuhlanganisa ipuleti le-Sauerkraut (enkulu ngokwanele abantu be-2) kanye nososeji nezinye izidlo zenyama. Lokhu kuvame ukuhunyushwa ngokuthi "sauerkraut" egcinwe kahle kumamenyu esiNgisi, lapho ngokungangabazeki ubuza iseva yakho. Okunye okukhethekile kufaka phakathi inyama ye-Alsatia ingulube ye-butcher, iFranceeküche noma amalangabi (tartes flambées ngesiFulentshi) okuwuhlobo lwe-pizza ebunjiwe eyindilinga eyenziwe nge-anyanisi-ukhilimu isobho, iBaeckehot, inyama yenkomo nengulube ephekiwe, namazambane kanye nezaqathe, imvamisa yenzelwe abantu ababili noma ngaphezulu kanye neFleischnackas, inyama yenkomo exubekile eyethulwe njengendlawu futhi ihanjiswe amasaladi.
I-Alsace yisifunda sokuqala esakhiqiza ubhiya eFrance naseStrasbourg sinezindawo eziningi ezifuywayo. Abaziwa kakhulu Kronenbourg futhi Fischer. Okuwukuphela kwemboni enkulu ezimele esele e-Alsace yiMeteor ekhiqiza amapulangwe, ilayisi kanye nezinto ezikhethekile kuKhisimusi nentwasahlobo.
Umzila we-Alsatia Vineyard
Kehl- Germany ukugibela iDemo noma ukuhamba ngaphesheya komfula.